Umkhuleko wocela abangani nomndeni
Ngokuvamile, abantu bavakashela ithempeli likaNkulunkulu ngesikhathi lapho banayo izihlobo zabo nabangane abaseduze, zikhona izinkinga ezihlukahlukene. Lo mbuzo ubuzwa: yini okufanele uyenze? Yini okumelwe uyenze? Ngesibawo ifihlekile futhi ubuhlungu, nokholo nethemba nothando.
Cela usizo kuMninimandla onke kubalulekile azigcinanga ngokulethela yena yedwa. UNkulunkulu uqobo lwaKhe usinikeze zonke bayathandaza. Ukuze wonke umuntu ngakho konke. Umkhuleko wocela abangane ukubuza ngenhlalakahle uMdali, izikweletu intethelelo nokukhululwa isilingo. It has enamandla amakhulu.
Ngo imithandazo umndeni nabangane abadinga usizo. kumelwe nithandaze abantu abafuna into efanayo futhi bafuna ukucabanga. Lokhu kubaluleke kakhulu.
Umkhuleko wocela abangane kungaba ngefomu vesi, makasho njalo ngamazwi akho. Isimo main: zonke izicelo kumele zivela enhliziyweni. Baba waseZulwini uyayizwa futhi ithumela yokudumisa okuqotho nempumuzo ababeguliswa izifo.
Into ebaluleke kakhulu. Khuluma imithandazo abangane, kudingeka uqonde ukuthi uMdali noma kunjalo ngeke akushiye dengwane. Nokho, lokhu akusho ukuthi kuzosiza - yiwo lapho abantu babenethemba. Ngokwesibonelo, endabeni lapho umngane oseduze ungaphakathi esibhedlela kumbulwa kwembeswa, kubalulekile ukuba ukhange umsizi, lapho befika endlini kaNkulunkulu, ecela insindiso yemiphefumulo. Nokho, ecela abakwazi ukubikezela ukuthi kuyoba usizo komunye umuntu e nayo kanye lensindiso - ukugula, ezempilo, khona kanye ekufeni.
Hlabelela imithandazo abangane, izihlobo nabangane, kufanele uqonde ukuthi ngokuphelele kudlule akhathele ezandleni zikaNkulunkulu. Phela, uNkulunkulu kuphela owazi ukuthi indoda kudingeka ngokombono iphakade. Njengomthetho, ucela abantu, ngokuvakashela ithempeli likaNkulunkulu, ekhala usizo lweNkosi, ngifisa sengathi bonke sase sihlala njengoba kubonakala ephephile. Kodwa ukuqonda okuhle, ngokuvamile ehambisana ne-ukuqonda kwezimpahla zezwe nesabasemhlabeni.
Ukuvakashela isonto waphendukela kuyo iNkosi uNkulunkulu, umuntu ngamunye kumelwe athathe okholweni, ukuqonda ukuphetha ngokuthi uMdali uyazi kanjani, ngubani futhi lokho kuyodingeka ezinhle ngempela. Yikuphi kuyasiza hhayi kuphela ngokuya ohlangothini umthengi zokuphila, kodwa futhi ngokombono ukuqonda okungokomoya. Kuze kube yimanje, ngokuvakashela ethempelini, ememeza kuNkulunkulu ecela usizo, kudingeka alungiselele ukuvakashelwa Nkulunkulu. Futhi lokhu kuyadingeka ukuze siyozimisela nokholo.
Izimangaliso kwenzekeni wabakhulula ngokuzumayo izihlobo nabangani balabo noma nezinye izifo, izingozi ezimbi. Nokho, lokhu akusho ngaso sonke isikhathi kwenzeke. Okuningi ngokuvamile abantu baya ethempelini nokukhuluma imithandazo abangane noma abathandekayo, ukuthi ubekezele futhi acabangele yokuthi izifo benganakiwe futhi izinkinga kungukuthi ixazululwe minutely. Uzikhuza kudinga ukuthobeka nokuvumelana isicelo njalo umzamo umsebenzi ukushintsha hhayi okungcono linqoba izimo. Ngakho-ke ukuthandaza abangane ukukhala inhlalakahle kanye nezempilo isiguli. Nokho, njalo ngeza: "Intando yakho mayenzeke."
Ekusakazeni lanamuhla wokuphila, ukuze sifunde ikhono lokubuza umthandazo, kumelwe ngaso sonke isikhathi ahlale noNkulunkulu. Kwenza mehluko lapho umuntu. Kubalulekile nje zama njalo kube kanye noBaba wethu waseZulwini. Ukuqala yiliphi ibhizinisi, kokuqeda iphrojekthi, udinga ukuthi "ngiyabonga" kuNkulunkulu. Elingaqondakali umthandazo ngobuqotho nangokusuka enhliziyweni.
Thandaza kuNkulunkulu njalo kunconyiwe, embiza akumelanga, hhayi njengoba imithetho ngekhanda, ekuseni noma kusihlwa. Funda umthandazo kumele kube kancane, ngesineke, nsuku zonke, ukulifaka isethi evamile izicelo. Esimweni lapho isicelo iqondiswa kuNkulunkulu inhlalakahle abangane, kuyothiwa kusekelwa nezinhloso ezinhle futhi Izinguquko ezenzeka ekuphileni kwakhe siqu - akungabazeki ukuthi uNkulunkulu uzoyizwa lesi sikhalazo futhi umvuzo is okudingayo izihlobo nabangane lomuntu egameni insindiso yemiphefumulo.
Umkhuleko wocela abangane evesini
Nginikeze injabulo, Nkosi, abangane bami,
Thanda emndenini wabo, futsi wabaniketa kuthula kwengcondvo,
Banike emhlabeni! Emthandazweni ngaphambi
Sibonga ngokusuka enhliziyweni phambi kwakho.
Namuhla e ukukhululwa okwandile "Umthandazo ngokugcwele", lapho ungathola imithandazo for izikhathi ezahlukene. Man unekhono ukhethe okulungile ngokwencazelo yaleli nokunxusa.
Ngakho sithandaze abangane Easter Happy nje endleleni uma ufuna impilo enhle kanye nenhlalakahle othembekile ngobusuku bangaphambi leli holidi elikhanyayo. Kungokufanayo uya for Christmas, le Annunciation, ngosuku St uPetru noPawulu. Nokho, ungakhohlwa ukuthandazela abangane babo hhayi kuphela ngamaholidi. Thandaza nsuku zonke. Mbonge wena, Nkosi.
Ubani okufanele ukugubha usuku ngo-September 30 ingelosi?
Imisipha round enkulu izinguquko ejimini noma ekhaya